Ndị ahịa anyị na-enwetakarị ozi dị ka nke a: Ego ole ka ọ na-ewe iji wuo ebe igwu mmiri? Nke a na-eme ka o siere ndị ahịa anyị ike ịza. Nke a bụ maka na ịwuru ọdọ mmiri bụ ọrụ dị n'usoro, ọ bụghị dịka m chere na m nwere ebe, gwuo olulu ma wuo ya. Pịa ...
25m * 12.5m * 1.8 m ime ụlọ okpomọkụ-achịkwa ọdọ mmiri akụrụngwa usoro oru ngo
site ha na 21-04-21
Graetpool malitere ọrụ ọdọ mmiri 25m * 12.5m * 1.8 m na-egwu mmiri na-achịkwa mmiri na ọdọ mmiri ụmụaka 3m * 3m * 0.8 m. anyị na-enye imewe na ngwọta nke a jupụtara set nke ọdọ mmiri mmiri ọgwụ usoro, gụnyere ọdọ mmiri mgbasa usoro, ọdọ mmiri filtration usoro, ọdọ mmiri kpo oku usoro, ọdọ mmiri di ...
N'èzí ọdọ mmiri oru ngo ikpe
Dị ka ọkachamara na-egwu mmiri ọrụ ụlọ ọrụ, anyị bụ ndị mpako nke ọma emebe disinfection na filtration usoro nke a igwu ọdọ mmiri. Ndị a bụ ọrụ ọhụụ ma gụnye nkwalite na mgbanwe na akụrụngwa dị.
Etu ị ga - esi malite ọrụ ezumike ọdọ mmiri nke onwe
Etu ị ga - esi malite ọrụ imepụta ọdọ mmiri nke onwe bụ ebe ana - egwu mmiri, ihe nkiri na ahụ mma, ndị nwe obodo na - akwado ya. Etu esi amalite iwuru ebe igwu mmiri maka ulo nke gi? Tupu ịmalite ọrụ ahụ, ka anyị buru ụzọ nweta nghọta ...
Atọ mgbochi na imewe na atụmatụ nke ebe igwu mmiri igwe
Anyị maara nke ọma na ụlọ anụ na nchekwa nke ọdọ mmiri na-adabere ọ bụghị naanị na akụrụngwa zuru oke ma dị mma n'onwe ya, kama ọ bụ ebe dị mkpa igwe dị ọcha ma dị ọcha. Dị ka ahụmịhe anyị si kwuo, anyị na-ekwubi ihe nchebe atọ: waterproof & ...
Usoro mgbasa nke ọdọ mmiri
Ọ dị mkpa na ọdọ mmiri mgbasa usoro na-arụ ọrụ dị ka o kwesịrị, ka unu nwee ike ịnụ ụtọ ọdọ mmiri gị ma nwee ọtụtụ oge obi ụtọ nke ịsa ahụ. Mgbapụta mmiri nfuli mmiri na-emepụta mmiri na skimmer wee pịa mmiri t ...
Kedu otu esi ahọrọ ọkụ ọkụ ọdọ mmiri iji tinye ọkụ na ọdọ mmiri gị?
Ebe a na-egwu mmiri dị jụụ ma na-enye ume ọhụrụ bụ nhọrọ amamihe dị na ya maka oge ọkọchị na-ekpo ọkụ, mana anwụ na-adị ike karịa ụbọchị ma ọkụ anaghị ezu n'abali. Gịnị ka anyị kwesịrị ime? Mmiri ọdọ mmiri ọ bụla chọrọ ọdọ mmiri ọdọ mmiri n'okpuru mmiri iji hụ ọkụ. Na mgbakwunye na ebe igwu mmiri, underwa ...
Igwu Pool Ngwọta, Igwu Mmiri Pool, Rooftop Pool Ngwa, Igwu Ulo Okpu, Igha mmiri nke Ọha, Ọrụ Igba mmiri,